T A H မှ ပုံ ပြ င် များ: ဓားဝေဒ သို့မဟုတ် ဗီလိန်တစ်ယောက် အကြောင်း
ဓားဝေဒ သို့မဟုတ် ဗီလိန်တစ်ယောက် အကြောင်း
အခမ်းအနားမှူး ဒေါက်တာ စန္ဒာထွဋ်သည် ခန်းမကြီး၏ အ၀င်ပေါက်အနီး စားပွဲကလေးပေါ်ရှိ ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်းကို တချက်သွားကြည့်ပြီး ၄င်းအတွက် သတ်မှတ်ပေးထားသော ခုံနေရာသို့ ပြန်လာသည်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပရာ ခန်းမကြီးသည် လူ ၁၅၀ - ၂၀၀ ခန့် ၀င်ဆန့်နိုင်အောင် ကျယ်ဝန်းသော်လည်း ခန်းမအတွင်း ရင့်ကျက် ခန့်ညားသော အသွင်ရှိသည့် လူ ၄၀ ကျော် ၅၀ ခန့်သာ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ထိုင်နေကြသည်။ သို့သော် ယနေ့ပြုလုပ်မည့် စာတမ်းဖတ်ပွဲ တက်ရောက်ခွင့်ကို TAE တော်လှန်ရေး တပ်ပေါင်းစု၏ အဆင့်မြင့် အရာရှိများအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသဖြင့် လူစုံနေပြီဟု ပြောလို့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒေါက်တာ စန္ဒာထွဋ်က မတ်တပ်ရပ်ကာ အခမ်းအနား စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပြီး စာတမ်း ဖတ်ကြား တင်ပြမည့် သမိုင်းသုတေသီ ၀ိမလအား ဧည့်သည်တော်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။
၀ိမလဆိုသူက ၄င်းခုံနေရာမှ အမြန်ထကာ ဟောပြောပွဲ စင်မြင့် ပြင်ဆင်ထားရာသို့ ခပ်သုတ်သုတ် လျှောက်သွားသည်။ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစား ထိန်းထားပုံရသော်လည်း ၄င်း၏မျက်နှာတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှု အရိပ်အရောင်များ ယှက်ပြေးလျှက် ရှိသည်။ သာမာန် သုတေသန ကျောင်းသား တစ်ယောက်အနေနှင့် ယခုကဲ့သို့ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ ရှေ့မှောက်တွင် စာတမ်း ဖတ်ကြားတင်ပြနိုင်သည့် အခွင့်အရေးမှာ ရှားပါးလှသည့်အပြင် ဖတ်ကြားမည့် စာတမ်း အကြောင်းအရာမှာလဲ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ၊ တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ၊ ပရိသတ် မနှစ်ခြိုက်စရာ ဖြစ်နေလေရာ ၀ိမလသည် ဟောပြောပွဲ စင်မြင့်သို့ ရောက်သည့်တိုင် ချက်ချင်း မစတင်ဝံ့သေးပဲ အခမ်းအနားမှူးဘက်သို့သာ လှမ်းကြည့်၍ နေလေသည်။ အခမ်းအနားမှူးက ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တော့မှ ၀ိမလထံမှ အသံထွက်လာသည်။
"ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာ … ဒီနေ့ ကျွန်တော် ဖတ်ကြားမဲ့ စာတမ်းခေါင်းစဉ်ကတော့ 'ဓားဝေဒ၏ တကယ့် ငယ်ဘ၀အကြောင်း' ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။"
တည်ငြိမ်လှသည်ဟု ထင်ရသော ပရိသတ်ဆီမှ တီးတိုးပြောသံ ခပ်အုပ်အုပ် ထွက်လာသည်။
"ရန်သူ့ဘက်က စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူ ဓားဝေဒရဲ့ ထေရုပတ္တိဟာ ကာလ ရွေ့လျောတာက တကြောင်း၊ မဟာဆည်းဆာ စစ်ဆင်ရေးကြီးနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စစ်ဆင်ရေးတွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးတွေ အများအပြား ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့် တကြောင်း၊ မုန်းတီးစိတ်ကို အရင်းခံလို့ လိုအပ်သည်ထက် ချဲ့ကား ပြောဆိုမှုတွေကြောင့် တကြောင်း အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ရပ်မှန်နဲ့ သွေဖီလို့ နေပါတယ်။"
ပရိသတ်ထဲမှ လူတစ်ယောက် မတ်တပ်ထရပ်၊ မေးခွန်း မေးမည်ပြုပြီးမှ ပြန်ထိုင်သည်။
"ဒီစာတမ်းအတွက် အချက်အလက်တွေကို မကြာသေးမီက သိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့ ရန်သူ့ ရှေ့တန်းစခန်းက မှတ်တမ်းတွေကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓားဝေဒကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ ဂျာဂျားဆိုသူနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေထံ ချဉ်းကပ် မေးမြန်းခြင်းနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းက ထိပ်တန်း လျို့ဝှက်အဆင့်ကနေ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တဲ့ မဟာဆည်းဆာ စစ်ဆင်ရေး အစီအမံနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက် မှတ်တမ်းများကို လေ့လာခြင်းတို့မှ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကို တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ဓားဝေဒဟာ အများ လက်ခံ ယုံကြည်ထားကြသလို ငယ်ကတည်းက မိုက်မဲ ဆိုးသွမ်းတဲ့ လူဆိုး၊ လူမိုက်တစ်ယောက် မဟုတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။"
၀ိမလ စကားမဆုံးမီပင် ပရိသတ်များထံမှ အသံများ ထွက်လာပြန်သည်။ ဒီတခါတော့ အခမ်းအနားမှူးက လက်ပြမှ ပရိသတ်များ အသံတိတ်ပြီး ၀ိမလ ဆက်ပြောလို့ရသည်။
"ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဓားဝေဒရဲ့ အမည်ရင်းဟာ ဓားဝေဒ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါးရသ် ဗေဒါ (ငယ်မည် - မသိ) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။"
ရှေ့ဆုံးနားတွင် ထိုင်နေသူတစ်ယောက်က မတ်တပ်ထ၍ "ဓားဝေဒဟာ ဓားရေး ကျွမ်းကျင်လွန်းပြီး သူ့ကို သင်ကြားခဲ့တဲ့ ဆရာကိုတောင် ပြန်ခုတ်သတ်ခဲ့တယ်။ နောင်ဖြစ်မဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို တိတိကျကျ သိမြင်နိုင်အောင် ဝေဒပညာမှာ တဖက်ကမ်းခတ်တယ်။ ဒါတွေကြောင့် ဓားဝေဒလို့ ခေါ်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလား။" ဟုမေးလေသည်။
"မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကာလရွေ့လျောလို့ အမှတ်အယူမှားကြတာပါ။ သူဟာ ဓားရေးကျွမ်းကျင်ပြီး ဆရာကိုတောင် တယောက်ချင်း ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာ မှန်ပေမဲ့ ဒီအတွက်ကြောင့် နာမည်ရှေ့မှာ ဓား တပ်ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါးရသ်ဟာ သူရဲကောင်းဘွဲ့တမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ဖတ်ရှုရတဲ့ မှတ်တမ်းတွေအရ သူဟာ သူ့ဆရာနဲ့ ၂ ကြိမ်တိတိ ဓားရေး ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ်မှာ သူရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ အများပြောနေကြသလို မူစတာဖာမှာ သူ့ဆရာ့ကို ခုတ်သတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းက … "
အခမ်းအနားမှူးက ကြားဖြတ်ပြီး စာတမ်းအကြောင်းကိုပဲ ဆက်ပြောပါရန် ပြောလေသည်။ ၀ိမလလဲ စာတမ်းပါ အကြောင်းအရာများကို ဆက်လက် ပြောကြားရတော့သည်။
"ဒုတိယ အချက်ကတော့ သူဟာ ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သူ့အမေကို သေတဲ့အထိ ပစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ သူ့အမေကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။"
"ဒါဆိုရင် သူကျွန်ဘ၀က ဘယ်လို လွတ်သလဲ။ သူ့ကို နှုတ်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့အမေက ကျွန်အဖြစ် ကျန်နေရတယ် မဟုတ်ဘူးလား။" … ပရိသတ်ထဲမှ အသံ။
"သူ့ကို နှုတ်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့အမေက ကျွန်အဖြစ်ကျန်ရတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမဲ့ သူနဲ့ နေရာချင်းလဲလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်က သူ့အမေက ကျွန်ဖြစ်လို့ သူက ကျွန်ဖြစ်ရတဲ့သဘောပါ။ အိမ်ပါကျွန်ခေါ်တာပေါ့။"
"ဒါဆိုရင် သူ့ကို နှုတ်တော့ သူ့အမေကို ဘာပြုလို့ မနှုတ်တုန်း။"
"ဒီအကြောင်းအရာတွေက ကျွန်တော်တို့လဲ သေချာ မသိရှိရသေးပါဘူး။ သူ့အမေကိုလဲ ကျွန်အဖြစ်က နှုတ်တဲ့သူနဲ့ သူ့ကို နှုတ်တဲ့လူ တစ်ယောက်တည်းဟုတ်၊ မဟုတ်တောင် ကျွန်တော်တို့ … " ၀ိမလက အခန်းအနားမှူး ဒေါက်တာ စန္ဒာထွဋ်ကို တချက်ကြည့်ပြီး "… ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသေးပါဘူး။"
၀ိမလက စာတမ်းကို ဆက်လက် ဖတ်ကြားသည်။ အနည်းငယ် ဖတ်ပြီးတိုင်းလဲ ပြန်လှန်မေးခွန်းက ထွက်လာစမြဲပင်။ လူတို့မည်သည် မိမိတို့ သိရှိထားသည်နှင့် ကွဲလွဲနေလျှင် မကျေနပ်နိုင်ကြ။ အခမ်းအနားမှူးက မကြာခဏ ကြားဝင်ကာ ၀ိမလကို ဆက်လက် ဟောပြောရန် စေခိုင်းရသည်။ ပရိသတ်တို့ အဓိက မကျေနပ်နိုင်သည်မှာ မူစတာဖာမှ အဖြစ်အပျက်များပင် ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ အစဉ်အဆက် မှတ်သားလာသည်မှာ သူ့ဆရာနှင့် သူ၏ချစ်သူတို့ကို သစ္စာဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲပြီး နှစ်ဦးစလုံးကို အသေသတ်ပစ်လိုက်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ၀ိမလက ဤသို့မဟုတ်၊ နှစ်ဦးစလုံး မူစတာဖာမှ အသက်ရှင်လျှက် ထွက်သွားနိုင်ခဲ့သည်၊ ဓားဝေဒကသာ ဒဏ်ရာပြင်းစွာ ရရှိသွားသည်ဟု ဆိုနေလေသည်။ ၀ိမလက သူ၏သီဝရီကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြသည်။
"ဓားဝေဒဟာ နောင်ဖြစ်မဲ့ အဖြစ်တွေကို တနည်းနည်းနဲ့ ကြိုသိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့ဇနီး သေဆုံးမဲ့အဖြစ်ကို သူဟာ ကြိုတင်ပြီး သိမြင်ခဲ့တယ်။ အမေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဓားဝေဒဟာ ဒါကို လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကံကြမ္မာကို ဟန့်တားနိုင်မဲ့ နည်းလမ်း၊ သေခြင်းကို တားမြစ်နိုင်မဲ့ နည်းလမ်းကို မရရအောင် ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားတယ်။ သူဟာ အများက လေးစားရတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုတောင် မငဲ့ကွက်နိုင်ပဲ မလေ့လာကောင်းတဲ့ မိစ္ဆာ စွမ်းအားတွေကိုပါ ချစ်သူအတွက် လေ့လာခဲ့တယ်။ အများက သူ့ကို ၀ိုင်းဝန်းရှုံ့ချနေကြပါစေ၊ မုန်းတီးနေကြပါစေ၊ သူ့ချစ်သူကိုသာ ကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင် သူပေးဆပ်ရတာ တန်တယ်လို့ သူတွေးခဲ့တယ်။ သူ့ချစ်သူက သူ့ကို နားလည်နိုင်မယ်၊ သူတွေးသလိုပဲ တွေးလိမ့်မယ်လို့ သူထင်ခဲ့တယ်။ သူဟာ အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေရုံနဲ့မပြီး၊ ချစ်တဲ့သူကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ခံယူခဲ့တယ်။"
"သူဟာ သူ့ဆရာကိုလဲ သူ့အစ်ကိုရင်းလို သဘောထားတာကြောင့် သူ့ဇနီးနဲ့ သင်္ကာမကင်း မဖြစ်ပါဘူး၊ သူသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ၂ ယောက်သား သူ့ကို မူစတာဖာမှာ လိုက်ခေါ်ကြတော့ သူ့ဆရာမှာ ဓားပါလာတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ဇနီးဟာ ချစ်တာတခုပဲ သိတယ်၊ သူမအတွက် အကာအကွယ်ပေးချင်တာကို နားမလည်နိုင်ပဲ သူ့ကိုတောင် သေစေချင်နေပြီ၊ သတ်ဖို့တောင် လူခေါ်လာပြီလို့ အထင်လွဲသွားတယ်။ တကယ်တော့ ဓားဝေဒဟာ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။"ဟု ၀ိမလက ဆိုသည်။ "သူ့ဇနီးကို သူချစ်လွန်းလို့၊ သူလုပ်နေတာအားလုံးက အချစ်အတွက် ဆိုတာကို နားမလည်ရကောင်းလားဆိုပြီး ဒေါသထွက်လို့ လည်ပင်းညှစ်မိတာပါ။"
"အဲဒါနဲ့ပဲ ကောင်မလေး သေတာပဲ မဟုတ်လား။"
"ဓားဝေဒဟာ ဒေါသအလျောက် လုပ်မိပေမဲ့ သူ့ဇနီးကို သူချစ်လွန်လွန်းလို့ သတိမေ့ရုံလောက်ပဲ လုပ်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီး သူလည်ပင်းညှစ်နေတာကို သူ့ဆရာက မြင်တော့ မတားပဲ မနေလောက်ပါဘူး။ တားမှာပါပဲ။"
"ဆိုလိုတာက ဓားဝေဒရဲ့ ဇနီးဟာ မသေဘူးပေါ့။"
"အမှန်ပါပဲ။ ဓားဝေဒ ဒဏ်ရာ ရသွားတော့ သူတို့ ၂ ယောက် မူစတာဖာကနေ ထွက်သွားပါတယ်။"
"သူ့ဇနီးက ဓားဝေဒကို မခေါ်ဘူးလား။ ဒီတိုင်း ထားပစ်ခဲ့သလား။ မင်းရဲ့ သီဝရီမှာ ဟာကွက်တွေ အများကြီးပဲ ရှိနေတာ သတိထားမိရဲ့လား။"
"ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့လဲ မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာတချက်က ဓားဝေဒရဲ့ ဇနီးဟာ နေ့စေ့လစေ့ကြီးမို့ မီးဖွားဖို့ လိုတာကြောင့် … "
"နေ့စေ့လစေ့ကြီး …" "မီးဖွားတယ် …"
ပရိသတ်ရဲ့ အသံများ ဆူညံသွားပြန်သည်။ အခမ်းအနားမှူးက စားပွဲခုံကိုထုကာ အတင်း ငြိမ်ခိုင်းရသည်။ အားလုံး ငြိမ်သွားပြီးမှ ခပ်၀၀ လူရွယ်တစ်ယောက်က ခပ်ငေါ့ငေါ့လေသံဖြင့် ထမေးပြန်သည်။
"ဒါဖြင့် ဓားဝေဒမှာ မျိုးဆက်ရှိတယ်ပေါ့။"
"တော်လှန်ရေး တပ်ပေါင်းစုရဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်သူ လုကာဟာ ဓားဝေဒရဲ့ သားဖြစ်နိုင်ကြောင်း အထောက်အထားတွေ တွေ့ရှိရပါတယ်။"
ခန်းမကြီးတခုလုံး ပွက်လောရိုက်အောင် ဆူညံသွားပြန်သည်။ ပရိသတ်များက အထောက်အထားများကို ကြည့်ရှုခွင့်တောင်းကြသည်။ အခမ်းအနားမှူးက အတင်း ကြားဖြတ်ပြီး ၄င်းအထောက်အထားများမှာ ယနေ့တိုင် ထိပ်တန်း လျို့ဝှက် အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသဖြင့် ကြည့်ရှုခွင့် မပြုနိုင်ကြောင်း၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်သဖြင့် ခန်းမ အပြင်ဘက်တွင် တည်ခင်းထားသော အစားအသောက်များကို သုံးဆောင်ရင်း ထိပ်တန်းလျို့ဝှက်အဆင့်မှ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်သော မှတ်တမ်းအချို့ကို ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း ကြေငြာသည်။ ပရိသတ်များမှ ၀ိမလကို မေးခွန်းများ မေးရန် ချဉ်းကပ်သွားသော်လည်း ၀ိမလက လုံခြုံရေးအစောင့်များက ခြံရံလျှက် ခန်းမအတွင်းမှ ထွက်ခွာသွားသည်။
ခဏမျှ အကြာတွင် ဆွေးနွေးပွဲ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ တက်ရောက်ရုံမျှအပ ညနေပိုင်းများတွင် မည်သည့် အလုပ်မျှ မည်မည်ရရ မရှိသော အဆင့်မြင့်အရာရှိ လက်တဆုပ်စာမျှသည် ယနေ့စာတမ်းဖတ်ပွဲ အစားအသောက်များ မနေ့ကထက် ပိုမို ကောင်းမွန်သည်/ညံ့ဖျင်းသည်ကို အကျေအလည် ဆွေးနွေးနေကြလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် အနောက်ဘက် အတ္တလန္တိတ်စစ်မျက်နှာရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော တော်လှန်ရေး တပ်သားများမှာမူ ၄င်းတို့၏ တခုတည်းသော အပန်းဖြေရာဖြစ်သည့် လွတ်လပ်ရေး ရုပ်သံ အစီအစဉ်ကို ဖမ်းယူ ကြည့်ရှုနေကြသည်။ ယနေ့ည အစီအစဉ်မှာ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး တပ်ခွဲ - ၃ မှ ရိုက်ကူး တင်ဆက်သော"ဓားဝေဒ၏ တသက်တာ မှတ်တမ်း အပိုင်း ၇ - မူစတာဖာ စီးချင်းတိုက်ပွဲ(ပရိသတ်များ၏ အားပေးတောင်းဆိုမှုအရ တတိယအကြိမ် ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း)" ဖြစ်လေသည်။
Star Wars Saga မှ စိတ်ကူးရယူပါသည်။
Posted by Law Shay at 10:59 AM
Labels: 69999 BC - 69500 BC
The best online casinos for Indian players in 2021
We choegocasino provide you with our 바카라사이트 best Indian casino list and bonuses for Indian players in 2021. Read on! Slots; Poker; Roulette; Slots; งานออนไลน์ Sports Betting